MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA NOOCYADA JILICSAN EE DAHAARKA LEH EE LOO YAQAAN 'WHEATEN TERRIER DOG DOG' - EEYAHA
Qaan-gaadh Qaan-gaadh ah oo Dahaaran Wheaten Terrier-Sawir waxaa iska leh David Hancock
Liiska eeyaha Dahaarka ah ee loo yaqaan 'Soft Coated Wheaten Terrier Mix Breed Dogs'
Terrier-ka Qamadiga ee jilicsan ee Irish
Terrier-ka loo yaqaan Softcoated Wheaten Terrier
sawiro KOH-waqti WEET-n TAIR-ee-uhr
The Soft Coated Wheaten Terrier, oo mararka qaar loo higgaadiyo 'Softcoated Wheaten Terrier,' waa eey is haysta oo si siman loogu qaybiyay. Madaxa dhexdhexaadka ah ee dhererkiisu waa qaab afar gees leh muuqaal ahaan iyo dheellitir ahaan jirka. Afka adag waa mid gaaban marka loo barbar dhigo dhakada oo wuxuu leeyahay joogsi qeexan. Sanka madow wuxuu weyn yahay cabirka eeyga. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas qaniinyada, bushimahuna way madow yihiin. Indhaha ballaadhan ayaa leh qaab yicib ah waxayna ku yimaadaan midab casaan leh oo midabkeedu dhexdhexaad yahay. Midab indhaha ama midab jaalle ah ayaa dhici kara laakiin cillad xagga cilladda ah ayaa ku jirta heerka qoraalka. Dhegaha oo qaabeeya V ayaa horay isku laaban waxayna la siman yihiin dhakada. Qoorta dhererka dhexe waxay si tartiib tartiib ah ugu sii fideysaa jirka. Dhabarka ayaa toosan, sameysanaya heer sare oo heer sare ah. Lugaha hore waa toosanyihiin lugahana waa is haysta oo wareegsan yihiin ciddiyaha madow. Dabada sare ee sare waa mid ku xidhan ama lagu hayaa mid dabiici ah. Fiiro gaar ah: dabo istaaggu waa sharci darro inta badan Yurub. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). Koodhka keliya, ee ruxruxsan ayaa ku yimaadda hooska sarreenka. Eeyadu waxay ku dhashaan bunni mugdi ah waxayna u iftiimiyaan midabka sarreenka ugu dambeeya ee qaangaarka markay gaaraan labo sano Waxaa jira laba nooc oo jaakad ah, Mareykan iyo Irish. Jaakada Irishku waxay u egtahay mid khafiif ah oo xariir ah.
Terrier-ka Qamadiga ee Dahaarka Leh ee jilicsan waa mid xoog badan, dhaqdhaqaaq badan oo isku xidhan. Waa jawi farxad leh, ciyaar leh, xamaasad badan oo saaxiibtinimo leh. Feejignaan, waxay ka dhigeysaa ilaalin aad u weyn oo qeylisa imaatinka martida. Caadi ahaan waa mid aad u jecel carruurta isla markaana si macquul ah ula macaamila eeyaha kale. An midaysan eey leh milkiile debecsan oo aan garanaynin sida iyo goorta la saxo dabeecadaha xun waxaa laga yaabaa inuu ku dhammaado eey dagaal badan. Qaar ka mid ah eeyahaas aan ahayn bisadaha lagu koriyay waxaa laga yaabaa inaysan si wanaagsan ula jaan qaadin iyaga. Waxa kaliya ee ay qaadataa waa xoogaa dhaqdhaqaaq dhaqso leh oo ku saabsan qaybta bisad , oo dareenka eygu wuu qabsan doonaa wuuna eryan doonaa. Eeygu wuxuu u baahan yahay in la saxo isla markiiba ka hor inta uusan duulin bisadda ka dib. Eeyahaani waxay leeyihiin dabeecad eey oo weli la joogta noloshooda oo dhan. Waxay yihiin dad macaan, dabacsan oo isku kalsoon. Cunnadani waxay u baahan tahay in la baro, doorbidayaa markay da 'yar tahay, laakiin eeyaha waaweyn ayaa wax baran kara waa maxay iyo waxa aan la aqbali karin . Waa mid caqli badan, markaa guud ahaan si dhakhso leh ayey u fahmi doontaa waxa looga baahan yahay. Waxay leedahay dabeecad toosan oo u baahan in si toos ah wax looga qabto. Soft Coated Wheaten Terriers waxay xiriir dhow la leeyihiin qoyskooda. Marar dhif ah ayay u ciyaan si aan loo baahnayn. Sarreenka jilicsan ee jilicsan waa inuu ahaadaa si fiican u dhexgalay eyda kale iyada oo ay ubax yar yihiin, laakiin dadka waaweyni waxay baran karaan waxa dabeecadda aan la aqbali karin ah haddii ay leeyihiin milkiile yaa si sax ah ula xiriirto iyaga la jira. Si loo helo a si wanaagsan u dhaqmay Qamadi, waa inaad adkeysid, laakiin is dejiso, joogto ah kuna kalsoonahay eyga. Milkiilayaasha Meeq wuxuu arkaa eeygu inuu si fudud guriga ula wareego wayna adkaan doontaa in la xakameeyo. Ha u oggolaan eeygan inuu ku bood bini'aadamka . Eeyaha boodboodaya ma 'salaamaan' aadanaha. Ku boodku waa qadarin iyo amar ku taaglayn.
Dhererka: Ragga 18 - 20 inji (46 - 51 cm) Dumarka 17 - 19 inji (43 - 48 cm)
Miisaanka: Ragga 35 - 45 rodol (16 - 20 kg) Dumarka 30 - 40 rodol (14 - 18 kg)
U nuglaanshaha cudurka baabi'inta borotiinka (PLE iyo PLN) iyo xasaasiyadda boodada.
Terrier-ka loo yaqaan Soft Soft Coated Wheaten Terrier wuxuu ku fiican yahay nolosha guryaha. Eeyahaani waa kuwo dhex dhexaad firfircoon gudahana daarad yar ayaa sameyn doonta. Noocani uma dulqaato kuleylka si aad u wanaagsan.
Terrier-ka Qamadiga ee Dahaarka Leh ee jilicsan ayaa lagu heli karaa jimicsi dhexdhexaad ah illaa inta la qaadanayo maalin kasta socdo .
Qiyaastii 5-6 eyyo
Markaad qurxinaysid Qalabka Dahaarka leh ee loo yaqaan 'Soft Coated Wheaten Terrier', ujeedadu waa in lagu gaaro muuqaal dabiici ah, cadayashada waxay ka dhigi kartaa jaakad jilicsan mid dawakh ah. Marka isticmaalka burushka laguma talinayo. Taa baddalkeeda, soo noqnoqoshada, xitaa maalin kasta, shanleynta jaakad dheer oo cufan leh shanlo dhexdhexaad ah ayaa lagu talinayaa in laga ilaaliyo qallafsanaanta - laga bilaabo marka eeyga uu eey yahay. Nadiifi indhaha oo si taxaddar leh u fiiri dhegaha. Maydho ama shaambo qalalan markay lagama maarmaan noqoto. Qalabka jilicsan ee loo yaqaan 'Soft Coated Wheaten Terrier' ma daadsho guga iyo deyrta, laakiin timaha dabacsan waa in laga marmariyo jaakadda waqti ka waqti. Ey si fiican loo hagaajiyay ayaa daadin doona wax aad u yar. Noocani wuxuu ku fiican yahay xasaasiyadda.
Terrier-ka loo yaqaan Soft Coated Wheaten Terrier wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Ireland waana suurtagal inuu yahay mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn Irish. Waxay la xiriirtaa labadaba Kerry buluug iyo Terrier-ka Ireland . Waxaa loo yaqaanay 'eeyga ninka miskiinka ah,' oo ka shaqeeya beeraha sida xoolaleyda, ilaalinta xuduudaha iyo ugaarsade uur-laawe iyo ugaad yar. Terat-ka loo yaqaan Soft Coated Wheaten Terrier waxaa markii ugu horreysay la keenay Mareykanka 1946. 1973-dii waxaa aqoonsaday xisbiga AKC. Qaar ka mid ah Tayada jilicsan ee loo yaqaan 'Soft Coated Wheaten Terrier' ee hibooyinkoodu waa ugaarsi, ilaalin, xoolo dhaqid iyo jiir.
IKC = Naadiga Kennelka Irish
CET = Naadiga Español de Terriers (Isbaanishka Terrier Club)
'Maggie Mae waa noocayaga jilicsan ee loo yaqaan' Soft Coated Wheaten Terrier '. Iyadu waa caqli badan, caqli badan oo jecel safarka. Waxay tagtaa inta badan safarada baabuurta ee aan qaadno. Kani waa sawir iyada ku saabsan safar aan ku tagnay Bangiyada Dibadda markii ay 7 bilood jirtay. Waa wehel layaableh. Maggie waxay leedahay jaakad Irish ah. '
Roxy The Soft Coated Wheaten Terrier at 2 sano jir- Iyadu waa eeyga ugu macaan! Waxay jeceshahay inay bisadaha ka ceyriso ardaaga oo ay la ciyaarto 'sis' Schatzie, a Gunta yar ee Dachshund . '
'Theodore aka: Teddy wiilka jilicsan ee loo yaqaan' Soft Coated Wheaten Terrier 'ee 9 bilood jira ka hor inta uusan si xun u jarin timaha.'
'Miskiin Teddy !! way xiireen! Aad buu u xishooday! Waqti si aad u hesho caruusad cusub! Ugu yaraan wuu qaboobi doonaa xagaaga! Teddy waa ubadkeena! Aad buu u dhaqan fiican yahay ... markuu rabo inuu ahaado. Markii aan 9 bilood jirnay waxaan wali isku dayeynay tareenka dheriga isaga !!! Yikes !!! Isagu waa qurux badan yahay oo way adag tahay in lagu qayliyo! Wuxuu helayaa fiiro badan! Wuxuu jecel yahay inuu dabaasho oo uu raaco baabuur raacis! Laakiin wuxuu neceb yahay in timaha laga jaro !!! Waad arki kartaa sababta! Joelle aka 'Teddy's Mom'
Sam Sample Terat Wheaten Terrier ee Dahaarka Dahaarka ah ee 1 jirka ah ee reer Spain ah 'Sam waa eey aad u jecel, xiiso iyo macaan badan.'
Doogan Terrier Terrier-ka markuu 4 sano jiro
Ardaygan yar ee la jecel yahay waa Doogan oo ka socda Dunida Qamadiga Dunida!
'Tani waa Riley. Isagu waa Terrier-ka Dahaarka ah ee Dahaarka leh. Wuxuu ahaa qiyaastii 3 bilood iyo badh sawirkan. Had iyo jeer waa mid madadaalo badan! '
Eeg tusaalooyin dheeri ah ee Terrier-ka Qamadiga ee Dahaarka Leh
Sawirro jilicsan oo Dahaaran Wheaten Terrier Sawirro 1
Sawirro jilicsan oo Dahaaran Wheaten Terrier Sawirro 2
Sawirro jilicsan oo Dahaaran Wheaten Terrier Sawirro 3
Sawirro jilicsan oo Dahaaran Wheaten Terrier Sawirro 4
shiino shar pei labrador mix
Ey la ciyaaraya eey ka weyn
Pyrenees weyn iyo adhijir Anatolian
collie xadka x adhijir Australia
eyga khafiifsan kahor iyo kadib
cirro iyo cadaan dane weyn